Dhageysi: Ifraax Axmad oo walaac ka muujisay gabdhaha da’da yar ee u dhimanaya jar-jaridda Xubnaha taranka – Bandhiga
Dhageysi: Ifraax Axmad oo walaac ka muujisay gabdhaha da’da yar ee u dhimanaya jar-jaridda Xubnaha taranka
Ifrax Axmad u doodda xuquuqda haweenka, sidoo kalena u ololeysa sidii looga hortagi lahaa gudniinka jarjarka xubnaha taranka ee gabdha da’da yar ayaa wareysi ay siisay Bandhiga Media waxay walaac kaga muujisay gabdhaha xubnahooda la jarjaryo kuwaas oo dalka kusoo badanaya.
Ifraax ayaa sheegtay iney ka murugeysantahay dhibaatada lagu hayo gabdhaha da’da yar iyadoo bishan September kaliya lasoo wariyey in ka badan Shan kiis oo ay ku jiraan gabdho walaalo ah oo u dhintay gudniinka fircooniga waxaana sidoo kale isbitaalka loo dhigay gabdho lagu sameeyey gudniinka fircooniga oo dhiig baxay, qaarkoodna xaaladooda caafimaad laga deyrinayo.
Waxaa xusid mudan in dowladda Federal-ka Soomaaliya ay ka hadashay iney ka hortageyso gudniinka firconiga sidoo kalena la ciqaabi doono cidii sameysa balse Ifraax Axmad ayaa dalbatay in laga dhabeeyo sharcigaas islamarkaana dowladda ay wax badan ka qabato sidii looga hortagi lahaa.
Ifraax ayaa horay u sameysay wacyigelin looga hortagayo in la jarjaro xubnaha taranka ee gabdha waxaana ay sheegtay iney sii wadi doonaan oo tuulooyinka iyo deegaanada fog fog ay tagi doonaan.
Ifraax oo hadda ku sugan dalka dibadiisa ayaa bishii lasoo dhaafay ee August sanadkan 2018 waxey socdaal ku tagaty magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug waxeyna booqatay isbitaalka iyo waalidiinta dhashay gabar da’yar oo lagu magacaabo deeqa taa oo u dhimatay gudniinka Fircooniga.
Ugu dambeyntii Ifraax ayaa waalidiinta dhalay gabdhaha da’da yar ka dalbadatay iney joojiyaan gudniinkaasi waxaana ay ka codsatay in ubadkooda aysan u horseedin dhibaato aduunyo iyo la noolaanshaha nolol aan la jecleesan.